:Bọchị: Jenụwarị 13, 2020
Minister Turhan: 'A Ga-Emezu Ọrụ Kanal Istanbul Dị Ka 2026'
Onye Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa nke Turkey Cahit Turhan kwuru nkwupụta banyere ọwa Channel Istanbul. Turhan mere ka o doo anya ihe mere achọrọ Canal Istanbul, mmiri ejiri mee njem ụgbọ mmiri International of the Bosphorus. [More ...]
N’oge a na-ekpe ikpe ahụ, ndị mkpọrọ nọ na-ekpe ikpe, ndị na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè, ọkachasị na mgbama mgbaama nke sistemụ ikpo oku, ileba anya nke enweghị ọzụzụ edepụtara. Dika akuko si di na Evrensel; Ntuli aka 24 nke June XNUMX n’enweghị usoro iji akara aka [More ...]
Turkey n'ụgbọala Industry Inc. National Electric Train mkpọsa na oru. Factorylọ ọrụ ahụ ga-eme ngwa ọrụ ya ma ndị ọrụ ga na-arụ ọrụ ugbu a na Satọde. A na-eme atụmatụ iji ụgbọ oloko a na-agafe n'okporo ụzọ na njedebe nke June ma ọ bụ July. Turkey n'ụgbọala [More ...]
Onye isi obodo nke obodo Sakarya Metroremitan Ekrem Yüce kwuru na a ga-enyocha nyocha maka ọrụ ụgbọ ala nostalgic, nke emere na nso nso a na mmeghe. N'ikwu okwu na kansụl obodo, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, nyocha ahụ jụrụ ụmụ amaala na ndị azụmaahịa kwuru. Obodo Ukwuu [More ...]
Azụmaahịa mba bụ mejupụtara ọnọdụ nke mgbanwe nke mba na ibe. Na mba anyị, ma ndị agbata obi ma ndị ala mba ofesi na mba ofesi nwere ihe niile gara aga [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan, Train Speed ​​Speed ​​nyere ozi gbasara ọrụ ahụ. Minista Turhan, igwe nyocha ule nke HAT, rue otu akụkụ nke ịnwale nnwale ga-amalite na Machị, o kwuru. [More ...]
Denizli Ski Center, nke bụ otu n'ime ebe kachasị amasị egwuregwu maka oge oyi, na-agba ọsọ na ndekọ ahụ yana ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa. N'ime oge ohuru a, ebe nleta ahụ ruru ihe ruru puku mmadụ iri ise. [More ...]
Ordu mepere emepe na-aga n’ihu n’itinye ego ndị ga-eme ka ịma mma nke Boztepe dịkwuo elu. N'ime usoro a, ụmụ amaala ga-enwe obi ụtọ na Boztepe nwere ụzọ ụzọ mbata okwute n'okporo ụzọ, ogige 27, nhazi ala ahịhịa. [More ...]
Ikpe ikpe mbụ nke ihe mberede ụgbọ elu dị na Ankara na Disemba 2018, ebe mmadụ itoolu nwụrụ na ihe karịrị mmadụ 80 merụrụ ahụ, malitere n'ụlọ ikpe Ankara. Atọ na ikpe ahụ [More ...]
Egwuregwu Palandöken na-asọba n'egwuregwu Egwuregwu
Ememe Palandöken, nke Erzurum Metropolitan Obodo haziri na Palandöken Ski Center, jupụtara na ndị na-anụ egwuregwu. Nrurugwu akpụrụ akpụ, ịgba ọsọ mmiri, ịgba akpụrụ mmiri na ọtụtụ ememme ndị ọzọ [More ...]
Obodo Konya, njikọta nke Gaza Street na City Street site na iwepu ngwụcha ngwụcha nghazi Njikọ Njikọ (Intelligent Junction) agafeela. Aydınlıkevler Junction, Selçuklu Junction, TOKİ Fırat Junction, Karatay Mmeputa [More ...]
Onye isi ala Tayyip Erdoğan's çılgın's project project nke Kanal ka akọwapụtara dị ka İstanbul Channel Istanbul sür burukwa, ebe ọrụ gọọmentị dịka Fatih Project, Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, Airport 3 na Hosplọ Ọgwụ City emezuwo n'afọ ndị na-adịbeghị anya. [More ...]
Onye isi GSO Adnan Ünverdi, teknụzụ mba na nke ụlọ n’ime oke nke ịkwaga n'ụgbọala anyị ụlọ gafere nnukwu ntụgharị, o kwuru. Onye isi oche nke Gaziantep (GSO) Onye isi oche Adnan Ünverdi, onye mba na [More ...]
Başakşehir Kayaşehir Metro Line akwụsịbeghị Imamoğlu
N'adịghị ka ebubo nke Minista Transportgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turan kwuru, ọ bụ Onye isi ala Istanbul Metropolitan Municipal (IMM), onye kwụsịrị iwu ụgbọ ala Basaksehir-Kayasehir n'ihe metụtara ụlọ ọgwụ obodo ahụ abụghị Ekrem Imamoglu mana Mevlut Uysal. Transportation [More ...]